Ukusebenza Ububanzi: 2600mm
Ubude bokusebenza: Ubukhulu: 1200mm
Ukusebenza komthamo: 720m³ / h
Yintoni umgquba ojikajika?
Ukujika komgquba, okwaziwa ngokuba ngumatshini wokwenza umgquba, umatshini wokuxuba ifestile, umatshini wokwenza isichumiso somgquba, umxube wokugalela umgquba, njl. umgquba, umgquba weenkomo, umgquba weerhasi, umgquba wenkukhu, umgquba weenkamela ...
Uyenza njani eziphilayo isichumiso nge-TAGRM’s umgquba ujike?
1. Lungisa umxholo wezixhobo zomgquba, phucula izinto eziphilayo ukuya kuma-50%. Ngokwesiqhelo inkunkuma kamasipala kufuneka yongeze umgquba wemfuyo, umququ wezolimo kufuneka wongeze umgquba wemfuyo, udaka lukamasipala kufuneka longeze uthuthu lomthi, njl.
2. Qokelela izinto zomgquba zibe yimfumba ezilungele umatshini osebenza ngomgquba ngobungakanani bawo.
3. Sebenzisa umatshini oguqula umquba ukujika, ukuxuba, ukutyumza kunye neoksijini izinto zokwenza umgquba rhoqo. Inkqubo yokutshiza enezixhobo inokongeza amanzi okanye ukubila.
4. Hlola imeko yokubila. Xa ubushushu bomgquba buzinzile kwaye buyafana nobushushu bommandla, ivumba lomgquba elifana nodongwe, umbala womgquba kufutshane nombala omnyama, isakhiwo somgquba sikhululekile, i-C / N <0.6, ukubila kugqityiwe.
Umzekelo M2600 Ukucoca komhlaba 130mm
Rate Amandla 68KW Uxinzelelo lomhlaba 0.46Kg / cm2
Ukukala isantya 2200r / min Ububanzi bokusebenza 2600mm Ubukhulu.
Ukusetyenziswa kwepetroli <235g / KW-h Ukuphakama kokusebenza Ubukhulu: 1200mm Ubukhulu.
Ibhetri 24V 2x12V Imilo yemfumba Unxantathu 45 °
umthamo wezibaso 40L Phambili isantya L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Ukulandela umkhondo Ubukhulu: 2830mm W2 Isantya esingasemva L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Yondla ububanzi bezibuko 2600mm W3 Ukuguqula irediyasi Ubukhulu: 1875mm imiz
Ngaphezulu 3400x2330x2850mm WlxLlxHl Imo yokuqhuba Ngesanti kubunzulu baphantsi
Ubunzima 2600kg Ngaphandle kwepetroli Amandla okusebenza 720m3/ h Ubukhulu.
Ububanzi roller 497mm Ngemela
I-M2600 yokuvavanya umatshini wokuhambisa umatshini kwifilimu. Umatshini wokuguqula umgquba we-M2600 uxuba imifuno.
Elona candelo likhulu lomatshini womgquba liya kupakishwa ze, amanye amalungu aya kupakishwa ebhokisini okanye kukhuselwe iplastiki.
Ukuba unazo naziphi na iimfuno ezizodwa ukupakisha, siya kupakisha njengoko isicelo sakho.
Egqithileyo Ixabiso lokuxuba umatshini wexabiso eliphantsi wemfuyo yehashe umgquba wokujika
Okulandelayo: I-TAGRM yomgquba ojikajika ujikeleze imfuyo yendlovu kumgquba kumyezo wezilwanyana
umatshini womgquba womvundla
umvundla ukwenza umgquba ukwenza umatshini
Umxube womgquba womvundla
umquba womvundla ujike
umvundla womgquba umgquba wejikajika jika
Chicken umgquba imfuyo umgquba Turner for mak ...
umquba ujike ngesichumiso somgquba ...